Igbo, John: Lesson 080 - Ndị mmadụ na-ekwusi onwe ha ike maka ikpe (Jọn 12:37-50) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 080 (Men harden themselves)
5. Ndị mmadụ na-ekwusi onwe ha ike maka ikpe (Jọn 12:37-50)
37 Ma ọ bu ezie na O mereri ọtutu ihe-iriba-ama n'iru ha, ma ha ekweghi na Ya: 38 ka okwu Aisaia onye-amuma we mezu, nke O kwuru, si, Onye-nwe-ayi, ònye kwere okwu-ayi? Ònye mere ka a kpugheere ogwe aka Onyenwe anyị? " 39 N'ihi nke a, ha enweghị ike ikwere, n'ihi na Aịzaya sịrị: 40" O mewo ka anya ha kpuo ìsì, o mewokwa ka obi ha sie ike, ka ha wee ghara iji anya ha hụ, ha we chigharia, M'gāgwọ kwa ha. 41 Aisaia we kwue okwu ndia mb͕e ọ huru ebube-ya, kwue okwu bayere ya.
Jizọs rụrụ ọtụtụ ihe ịrịba ama nke ihe mgbaru ọsọ ịhụnanya na Jerusalem. Ndi nile ndi nwere obi di njikere imata ike ya na isi ya kama ndi nkpuchi, ndi ekpochire anya n'echiche gara aga, ha amataghi Jizos, ebe obu na ha turu ya dika uzo nke echiche ndi gbagwojuru anya.
Otutu ndi mmadu juputara n'echiche nke ha ma ghara ige nti olu Chineke. Mmụọ Nsọ na-ekwu nwayọ na nwayọ ma na-achọ uche nke obi.
Ma ndị nnupụisi ahụ, megidere Mmụọ Nsọ na-ekwu okwu na ozioma, ọ bụghị nanị ime ka mkpụrụ obi ha sie ike, ma Chineke n'ekpe ikpe ya na iwe ya wepụrụ ikike a na-amụ n'ime ha ịnụ ma hụ ma mee ka ha sie ike. N'ihi ya, ha agakwaghị enwe ike ịma mkpa ha. Chineke bụ onye nnọchiteanya nke nzọpụta na ikpe.
Anyị na-achọpụta na ụfọdụ ezinụlọ, agbụrụ na mba dị iche iche yiri ka ha bi n'okpuru iwe Chineke. Ọ na-eleghara ndị na-apụ na-adịgide adịgide site n'aka ya, mgbe ọ gbasịrị ugboro ugboro iji duzie ha azụ n'ụzọ ziri ezi. Chineke na-eme ka ndị na-enupụrụ isi Mmụọ Nsọ ya isi ike. Ndi nile ndi n'ejidesi ima ya ike ma ju ike nke Kraist gada nime ikpe. Chineke n'ihi ịdị nsọ ya aghaghị iji nwayọọ nwayọọ mee ka ndị nnupụisi ahụ daa n'iyi.
Echiche nke Chineke na-agbagwo ndị na-emegide ya abụghị nkà ihe ọmụma dị egwu, kama ọ bụ n'ebube ya. Nke a Aisaia ghatara mgbea nuru na Onyenwe anyi eziteghi ya ido puta ndi ya kama ime ka obi ha sie ike (Aisaia 6:1-13). Ime nkwusa banyere ịhụnanya dị mfe karịa ịdọ aka ná ntị maka iwe na ikpe Chineke.
Ịhụnanya Chineke na ejikọta na ịdị nsọ, eziokwu na ikpe ziri ezi. Agdghi iheo jaa pr idi n'iru ya, kama o gaabia site n'ìhè nke ebube ya. Ebe ọ bụ na Jizọs bụ Onye Nsọ dị nsọ, ọ na-ekewapụ ndị mmadụ. John ji nkwuwa okwu kwuo na Onye ahụ nọ n'ocheeze, dị ka Aịzaya hụrụ, bụ Jizọs, n'ihi nà Chineke na Ọkpara Ya bụ otu n'ime ịdị nsọ na ebube.
42 Otú ọ di, ọbuná n'etiti ndi-isi ọtutu madu kwere na Ya: ma n'ihi ndi-Farisi ha ekwuputaghi ya, ka ewe ghara ichupu ha n'ulo-nzukọ: 43 n'ihi na ha huru otuto madu n'anya kari otuto Chineke.
John, onye na-ezisa ozi ọma, maara na nnukwu ezinụlọ ndị nchụàjà (Jọn 18:15). Ọ na-agwa anyị na n'agbanyeghị nchụpụ nke ọha mmadụ si n'aka Jisọs, ụfọdụ ndị isi na-ekwere na ya. Ha ghọtara na Chineke nọnyeere ya na h bụ okwu jupụtara n'ike na eziokwu, ma ha anaghị agba àmà n'ihu ọha.
Gịnị mere ndị ikom dị otú ahụ ji kwenye na mkpebi ahụ megidere akọ na uche ha? Ha na-atụ egwu ndị Farisii, na-ahọrọ nchekwa na ịkwado eziokwu ahụ. Ndị Farisii amaro ndị Jerusalem egwu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla akwado Jizọs. N'ihi ya, ndị nnọchianya a achọghị ịhapụ ùgwù ha ma bụrụ ndị a machibidoro iwu machibido iwu na mkpagbu. Onye ọ bụla e bipụtara site na mba ahụ enweghị ike ịzụta ma ọ bụ ree ya, ma ọ bụ lụọ ma ọ bụ kpee ekpere n'etiti ndị ya. A na-ewere ya dịka onye ekpenta na-ebute ọha mmadụ.
Gịnị mere ndị nnọchianya a anaghị ekwupụta n'agbanyeghị nkwenye nzuzo ha? Ha họọrọ otuto mmadụ karịa otuto Chineke. Ma ime ka Chineke di nma abugh ihe ha choro; ha hụrụ onwe ha n'anya karịa Onyenwe ha.
Ahụhụ ga-adịrị onye nanị ya na-ekwere na nzuzo ma na-eme dị ka à ga-asị na ọ maghị Jizọs. Nwoke dị otú a ga-agọnahụ Onyenwe ya n'oge awa dị egwu. Ọ na-achọ nchedo na aha ọma na nsọpụrụ na nchebe Chineke. Na-ekwuputa Onyenwe gi na Onye nzoputa gi, na-enwe obi ike na ya ga-eduzi gi n'uzo ziri ezi dika o si di nma.
44 Jizos we tie nkpu, si, Onye ọ bula nke kwere na Mu, ọ bughi na Mu ka o kwere, kama ọ bu Onye ziterem. 45 Onye nāhum nāhu Onye ziterem.
Jizos kporo ndi ya ka ha chègharia, náeme ka mkporo nke iheþm'm' ya di icheiche n'ikwu okwu siri ike, ma n'otù oge ah ka náeme ka di ya n'ono. Na mbido, nke a yiri ihe na-emegiderịta onwe ya dị ka a ga - asị na ọ na - asị, "Onye na - ekwere na m, anaghị ekwere na m!" Jisos ejigh onye obula nebe ya, kama Okpara ahu kuru ndi nile soro ya nenyere Nna ya nso. Ọ na-eme onwe ya ka o nwee ikike pụrụ iche, ọ gaghị atụ anya ka mmadụ tụkwasị ya obi naanị ya. Ọkpara ahụ adịghị egbochi Chineke inwe okwukwe ụmụ mmadụ; Ya mere, ọ naghị ewepụ ebube Chineke, ma na-ekpughe ma na-enye ya otuto mgbe nile.
Nka bu kwa eziokwu: Ọ dighi onye ọ bula nābiakute Nnam, ma site na Ọkpara; ọ dịghị ezi okwukwe na Chineke ma e wezụga Ọkpara ahụ. Nna nyere ya ndi nile kwere ekwe ka ha buru ndi ya di iche iche ma jiri ya nile mara Chineke mma. Ya mere, nwa nke di umeala nwere ike ikwu n'eme onwe ya anya, "Onye nahu m ahuwo onye ziterem." Jizos b ezi Onyeozi nke sitere n'aka Chineke nke naenwe ike na ebube nke Chineke ino rube isi. Jizọs na-anọchite anya ihe dị mkpa nke ndụ Chineke, ìhè na ịma mma. Anyị amaghị Chineke ọzọ, ma e wezụga ihe atụ Jizọs gosipụtara na ndụ na mbilite n'ọnwụ ya. Ịdị umeala n'obi ya mere ka ọ dịrị Nna ya. N'ezie, Onye ahu nke Aisaia huru bu Jizos n'onwe ya, n'ihi na odigh ihe di iche n'etiti Nna na Okpara.
46 Mu onwem abiawo ka uwa buru ìhè, ka onye ọ bula nke kwere na Mu we ghara ib͕a n'ọchichiri. 47 Ọ bụrụ na onye ọ bụla egee ntị n'okwu m, ma ọ dịghị ekwere, adịghị m ekpe ya ikpe. N'ihi na abiaghm ikpe uwa ikpé, kama ib͕ọputa uwa. 48 Onye nāju Mu, nke nādighi-anakwam kwa, ọ nwere onye nēkpe ya ikpe. Okwu m kwuru, otu a ga-ekpe ya ikpe n'ụbọchị ikpeazụ.
Nsogbu dị egwu dị egwu na ụfọdụ obodo nta nke Africa. Ndị mmadụ ga-agbanye n'ọhịa n'ime ọhịa ha n'ihi ahụ ọkụ ahụ. Dọkịta ahụ gbagara n'obodo ahụ ghọtara na a ga-ebibi germs nke ọrịa a ma ọ bụrụ na onye ọrịa ahụ na-eje ije na ìhè anyanwụ. Ya mere, o tiri mkpu, si, "Si n'ulo ogwu gi bia, gwoo gi aru. Ọtụtụ ndị wee banye n'ìhè ma gwọọ ha. Ndị ọzọ ekweghị dọkịta ahụ n'ihi ihe mgbu ahụ; ha nọrọ n'ụlọ ma nwụọ. Dọkịta na ụfọdụ ndị ọzọ gwọọ ahụ hụrụ ụfọdụ ndị nọ na ọnwụ nke ọnwụ, ma jụọ, "Gịnị mere ị gaghị apụ na anyanwụ?" Ha zara, "Ahụhụ ga-adịrị anyị, anyị atụkwasịghị obi n'okwu gị, ha yiri ka ọ dị mfe, anyị na-arịa ọrịa ma ike gwụrụ." Dọkịta ahụ zara ya, sị, "Ya mere ị nwụghị n'ihi ọrịa ahụ, ma n'ihi na ị kwenyeghi ntụziaka m."Ihe atụ a na-akọwa ike Kraịst. Ọ bụ Sun nke Ezi Omume na-ebili n'ọchịchịrị nke mmehie, Victor na-ebute ebe ọjọọ si apụta. Onye na-abanye n'ime ìhè ya dị ebube na-azoputa. Ọ dịghị ihe ọ bụla ọzọ kama iji zọpụta ụmụ mmadụ n'aka mmehie na ọnwụ. Okwu ya nwere ike ịtọhapụ anyị n'aka ndị agha niile. Onye nuru okwu ya, kwenyebere ma kwere, biakutere ya ma rube isi, di ndu ruo mgbe ebighebi. Ọnwụ agaghị enwe ike ịchị ya.
Ma onye na-ege okwu ya ma ghara izo ya n'obi ya, ọ ga-adaba n'ime mmehie ma bido n'ime ikpe na ọchịchịrị dị n'èzí. Ot'odi, ozioma di na onye ikpe na-ekweghi ekwe na ihe kpatara ya. Ị kwetara na Jizọs bụ Onye nzọpụta gị? Ị na-eburu okwu ya n'isi ma kpebie ibi ndụ na ha?
49 N'ihi na ọ bụghị m onwe m kwuru okwu, kama ọ bụ Nna m nke zitere m ka o nyere m iwu, ihe m ga-ekwu na ihe m ga-ekwu. 50 Amataram na ihe O nyere n'iwu bu ndu ebighi-ebi. Ihe ndia nke Mu onwem nēkwu, dika Nnam kwuworo okwu bayerem, otú a ka M'kwu.
Jizọs bụ okwu Chineke. Naanị ihe Chineke na-eche na ọchịchọ bụ ihe anyị na-anụ mgbe Jizọs na-ekwu. Kraist bu ozi ziri ezi nke Chineke nye gi. Nwa ah u rubere isi, o gere nti olu Nna ya wee sụgharia ya n'asusu mmadu. Chineke na-ekwu okwu site na ya gaa n'ụwa ikpe ikpe, dị ka a ga-asị, "Mụ onwe m bụ Onye Na-adịru Ebighị Ebi, m ga-abụkwa Nna gị: site na amara ka m ga-enye gị ndu ebighi ebi: I nwere ike iwe iwe na mbibi Chineke, mana m hụrụ gị n'anya; n'enye m Okpara nso n'inye gi, ka i wee gua n'onye ezi omume, ma nata Mo Nso, i gaghi anwu .. M na ario gi ka i nweta ndu ebighebi n'aka Meza m, onye obula adighi ahu Paradais ma obu ezi ndu. " Site na okwu ndị a, Chineke na-enye ụwa nzọpụta nzọpụta. Ma onye ọ bụla nke na-eleghara Kraịst anya ma ọ bụ na-ajụ ya ga-ada n'ime abis, n'ihi na ọ jụwo iwu Chineke nyere ndụ.
EKPERE: Nna, anyị na-ekele gị maka inye anyị ndu ebighi ebi. Anyị na-eto ma na-eto gị na ọṅụ. I meela ka anyi si na onwu gaa ndu, site na ndu nke nmehie na ihu n'anya gi. Na-edebe okwu nke Ọkpara gị n'ime anyị ma debe ha n'ime obi na uche anyị, ka anyị mịa mkpụrụ. Na-eme ka ọtụtụ ndị dị ọhụrụ site n'Oziọma gị. K'anyị kụziere mmadụ niile ozi gị, ka ha wee dịrị ndụ ma ghara ịnwụ.
Gịnị bụ iwu Chineke nyere Kraịst niile n'aka mmadụ nile?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:28 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)